Jamaika dia hanao sonia MOU vaovao momba ny fampandrosoana ny fizahantany miaraka amin'i Espaina
Minisitry ny fizahantany, Hon. Edmund Bartlett (ankavia) dia niresaka tamin'ny Minisitry ny Indostria, Varotra ary Fizahantany Espaina, Hon. Reyes Maroto, ao amin'ny FITUR, ny seho ara-barotra iraisam-pirenena isan-taona sy fizahan-tany manan-danja indrindra eran-tany, izay mandeha any Madrid, Espaina. Nivoitra tamin’izany fihaonana izany ny hisian’ny fifanaraham-piaraha-miasa amin’ny sehatra samihafa amin’ny fampandrosoana ny fizahantany. - Sary avy amin'ny Minisiteran'ny Fizahantany Jamaika
Ny fanambarana dia taorian'ny fihaonana tamin'ny minisitry ny Indostria, ny varotra ary ny fizahantany any Espaina, Hon. Reyes Maroto, androany tao amin'ny FITUR, ny seho ara-barotra iraisam-pirenena isan-taona sy ara-barotra fizahan-tany manan-danja indrindra eran-tany, izay mandeha any Madrid, Espaina. Ho fanampin'ny Repoblika Dominikanina, izay firenena mpiara-miombon'antoka FITUR amin'ity taona ity, ny FITUR dia mampivondrona firenena efa ho zato misy solontena ofisialy fitopolo.
“Tena faly aho manambara izany Jamaika ary i Espaina dia hamolavola fifanaraham-piaraha-miasa amin'ny sehatra isan-karazany amin'ny fampandrosoana ny fizahantany. Nifanakalo hevitra be izahay sy ny Minisitra Morato androany mikasika ny lafiny fanarenana sy ny famerenana indray ny fizahantany ho toy ny mandrisika ny fitomboana ara-toekarena sy ny fanovana”, hoy i Bartlett.
“Nifanakalo hevitra momba ny andraikitry ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fizahantany ao amin'ny Firenena Mikambana izahay ho andrim-panjakana manan-danja amin'ny fiarovana ny fampiharana akademika sy azo ampiharina ilaina amin'ny fanavaozana ny fizahan-tany vaovao izay ahafahan'ny firenena madinika sy ny mpilalao madinika sy salantsalany hanana traikefa ara-drariny kokoa ary ho tafarina. betsaka amin’ny fidiram-bola very”, hoy ihany izy.
Jamaika dia mpitarika eritreritra.
Nanararaotra nanasa ny Minisitra Morato ihany koa i Bartlett tamin'ny Andro Faharetan'ny Fizahantany Maneran-tany voalohany tao Jamaika, natao ny 17 Febroary 2022, tao amin'ny World Expo any Dubai. Ny andro dia hifantoka amin'ny fahafahan'ny firenena manangana fahaiza-manao hamaly ny fahatafintohinana iraisam-pirenena sy manerantany ary afaka maminavina amin'ny fomba azo antoka kokoa ny valintenin'izy ireo. Hanampy ireo firenena amin'ny fahatakarana sy fanalefahana ny fiantraikan'ireo fahatafintohinana ireo amin'ny fivoarany ihany koa izany, fa ny tena zava-dehibe dia hanampy azy ireo hitantana sy ho sitrana haingana aorian'ireo fahatairana ireo.
"I Jamaika dia tena mpitarika eritreritra amin'ity sehatra ity, ary manolo-tena hiara-hiasa amin'ny mpiara-miombon'antoka rehetra izahay mba hananganana tontolo matanjaka kokoa, mahomby ary maharitra izay afaka mamaly tsara kokoa ny fahatafintohinana izay ho avy rehefa manohy ity dian'ny fiainana ity. ”, hoy i Bartlett.
More on: Jamaika | Spa | fikambanana | Fikambanana iraisam-pirenena momba ny fizahantany | ny niatrika an'izany | Espaina | firenena Mikambana | Tourism
IGLTA post-pandemic LGBTQ+ Travel Survey dia nahazo ny loka CETT Alimara fikambanana, Tourism, Fikambanana iraisam-pirenena momba ny fizahantany|
Four Seasons Hotel Montreal: Torolàlana momba ny dia Forbes naoty kintana folo ary ny tsara indrindra an'ny Tripadvisor amin'ny tsara indrindra amin'ny 2022 anglisy ￼￼ Spa|
Lalana Travel Dakota Avaratra Tourism|
Jamaikafikambananany niatrika an'izanySpaEspainaTourismfirenena MikambanaFikambanana iraisam-pirenena momba ny fizahantany
Ny Carnival Cruise Line dia mamakivaky ny seranan-tsambo vaovao ao amin'ny Nosy Grand Bahama
Previous Sidina mivantana maro eo anelanelan'i Etazonia sy Shina naato
Manaraka Ny fitsapana klinika vaovao dia mikaroka ny fanentanana ati-doha lalina hitsaboana ny Alzheimer